Dowladda oo duulan ku ah Kismaayo iyo Ciiddamadda Kenya oo dhufeysyo hor leh sameystay – idalenews.com
Col. Warfaa Sheikh Aadna oo kamid ah Saraakiisha Sar sare ee Ciiddamada Dowladda Somalia ee Gobollada Jubbooyinka ayaa shaaciyay inay qaadayaan Dagaal ka dhan ah Ciiddamadda Kenya ee ka qowleysanaaya Magaalladda Kismaayo.
Col. Warfaa Sheikh Aadna, waxa uu sheegay inay soo afjareen dadaalkii ay ugu diyaar garoobi lahaayen Weerarada ka dhanka ah Ciiddamadda Kenya iyo kuwa Raaskambooni uu ku sheegay inay yihiin kuwa Khilaafsan Nidaamka Xukuumadda Somalia ee Gobalada Dalka.
Sidoo kale, Col. Warfaa Sheikh Aadna, waxa uu sheegay in Ujeedka dagaalka uu yahay mid lagu doonaayo in gacanta Dowladda dib loogu soo celsho Magaalladda Kismaayo, loogana Saaro Ciiddamadda Kenya iyo kuwa daacada u ah oo uu ku sheegay Raaskambooni.
Dhanka kale, kulan Xasaasi ah oo garoonka Kismaayo ku dhex maray Saraakiisha Kenya iyo Raaskambooni, ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday Dagaalada ay Xukuumadda Somalia maagantahay inay ku qaado Kismaayo, waxaana kulankaasi leysla meel dhigay in la howlgalsho gawaarida dagaalka Raaskambooni iyo kuwa Kenya ee xareysan.
Dowladda Kenya, ayaa iyadu ka biya diidan inay ka baxdo Magaalladda Kismaayo, iyadoona dhawaan uu arrintaasi shaaciyay Taliyaha guud Ciiddamadda Kenya in Ciiddamadoodi ay kusii sugnaan doonaan Kismaayo.
Ma cadda sida uu xaalka ahaan doono waxaan jira dhaqdhaqaaqyo Ciiddan oo ay Kismaayo si wada jir ah uga wadaan Ciiddamadda Kenya iyo kuwa Raaskambooni.
AKHRISO 11-Qodob oo Fashiliyay Siyaasadda Xukuumadda Somalia iyo Sirtii u qarsooneyd